Rugby à XV: tafita amin’ny «Mondial 2019» i Namibia | NewsMada
Rugby à XV: tafita amin’ny «Mondial 2019» i Namibia
Par Taratra sur 21/08/2018
Taorian’i Afrika Atsimo, nahazo ny tapakila hiatrehany ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, taranja rugby à XV “Mondial 2019”, hatao any Japon, ihany koa ny Namibianina. Ny fandresena azon’ny Les Welwitschias Namibia, nanoloana an’i Kenya, teo amin’ny fiadiana ny «Africa Gold Cup, notanterahina ny asabotsy lasa teo, no nahatafita azy ireo.
Lavon’ny Namibianina, tamin’ny isa mazava 53 no ho 28, ny Kenyanina. Anisan’ny nanampy be azy ireo ny fahazoany ny «bonus défensif». Na izany aza, faly sahirana ihany ny Namibianina satria tafaraka amin-dry zareo All Black avy any Nouvelle-Zélande, izay tompondaka eran-tany farany, sy i Afrika Atsimo ary i Italia, ao amin’ny vondrona «B».
Mbola hiatrika ny lalao sakana kosa i Kenya ka hifanandrina amin’i Kanadà sy i Alemaina ary i Hong-Kong. Tafita amin’ny “Mondial 2019” izay ekipa voalohany amin’izy ireo ka hanampy isa ireo ao amin’ny vondrona “B” ihany koa.
Tsiahivina fa hotanterahina ny 20 septambra ka hatramin’ny 2 novambra 2019 ity fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, amin’ny rugby sokajy lehilahy, ity.